Umthetho Wezabasebenzi | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Umthetho wezabasebenzi
Iyiphi indlela yeendlela zokunakekelwa kwezempilo kwaye ngubani ohlawulayo?
Yintoni indlela yezempilo kwaye ngubani ohlawulwa ngayo? Urhulumente uvumile isicwangciso sotshintsho esenziwe nguMphathiswa Wezempilo kwinkqubo yokhathalelo lwempilo yaseRussia kule minyaka mithandathu izayo. Imephu yendlela icacisa ...
Yintoni efunekayo emva kokuhamba emva kobusuku? Yaye ngokweyiphi inqaku?
Yintoni efanele ibe kukuphumla emva kokutshintsha kobusuku? Kwaye ngokuhambelana neliphi inqaku? Mnye kuphela umda wokutshintsha ebusuku -Ukutshintsha kobusuku kufuneka kube iyure e-1 imfutshane kune ...
Ngubani obonwa ngokuba ngumcebisi osemncane kwimfundo?
Ngubani othathwa njengengcali encinci kwezemfundo? onamava ukusuka kwi-1 ukuya kwiminyaka eyi-3. Ingcali yangaphambili ichaze umxholo wengcali encinci. Naziphi na izibonelelo ezizodwa zabaqeqeshi abancinci kwinkqubo ...
Yintoni umqeshwa weSebe lezabasebenzi
Wenza ntoni umqeshwa weSebe le-HR ukwenza imisebenzi engama-30 ... ngaba yinyani ngokwenene ??? iyahambelana nobomi ?? eyoyikisayo ... abasebenzi bohlulwe ngabasebenzi OYINGCALI ZE-HR Uxanduva lomsebenzi. Yenza umsebenzi wokuqesha umbutho nabasebenzi ...
Ingaba irhafu yerhafu?
Ngaba iipremiyamu zirhafiswa? Kuphela luncedo lwezinto eziphathekayo olungaxhomekekanga kwirhafu yengeniso, okuseleyo ngumvuzo, naziphi na izibonelelo, iibhonasi kunye nekhefu lokugula-irhafu. kuba le yingeniso eqhelekileyo ...
Ngaba ishedyuli yomsebenzi ishintsha kubafazi abakhulelweyo?
Ngaba ishedyuli yomsebenzi wabasetyhini abakhulelweyo iyatshintsha? Ubhala isicelo seveki okanye somsebenzi wexeshana (uzikhethele ngokwakho ukuba ufuna ukusebenza kangakanani :), kwaye umqeshi akanalungelo lakukulahla! Ikhowudi yabasebenzi yeRussian Federation ...
Umlinganiselo kunye nomvuzo. Uwuphi umehluko?
Ireyithi nomvuzo. Uyintoni umahluko? Umvuzo wexeshana uhlawulwa ngokomlinganiselo weeyure ezisetyenziweyo. Oku kuhlala ku-50% yomvuzo. UMVUZO -ubungakanani bomvuzo osisigxina wexesha elithile, njengomthetho ...
nceda ucacise ubugcisa. I-125 TK RF kunye no-Art. Xnumx
ndicela ucacise ubugcisa. I-125 yeKhowudi yabasebenzi yeRussian Federation kunye neArt. 115 kukho into enjalo-ishedyuli yeholide. mhlawumbi Kulungile ukhokelwa yiyo? uvumelana njani nomqeshi, eyona nto ibalulekileyo kukuba icandelo lokuqala leholide ...
Ndimele ndihlawule ixesha elingakanani lokuhlawula ikhefu lokugula emsebenzini?
Kufuneka ihlawulwe ixesha elingakanani emsebenzini emsebenzini? I-inshurensi ichonga izibonelelo zokungakwazi ukusebenza okwethutyana emsebenzini, ukukhulelwa nokubeleka, isibonelelo senyanga sokugcina abantwana kwiintsuku ezili-10 zekhalenda ukusuka ...
Uwuphi umehluko phakathi kweyunyunyana kunye nomanyano?
yintoni umahluko phakathi kwekomiti yemanyano yabasebenzi neyuniyoni? umbutho wabasebenzi ngumbutho. umbutho wabasebenzi - ubunkokheli bemanyano yabasebenzi (umbutho). ikomiti yemanyano yabasebenzi ayizizo iinkokheli zemanyano yabasebenzi. Lo ngumbutho ophambili wengingqi womanyano lwabasebenzi kwisityalo esithile ...
Imithetho yemingcele kwimibango yabasebenzi.
Ummiselo wokuthintelwa kweembambano zabasebenzi. Ukuba wayeqeshwe kwisicelo. Kuyimfuneko ukuba ubhalele i-ofisi yomtshutshisi Umhla wokugqibela wokuba umqeshwa aye enkundleni ukusombulula ingxaki yabasebenzi ibekiwe ...
zeziphi iimpepha umqeshi kufuneka anike inkampani LLC xa exoshela eyedwa
ngawaphi amaxwebhu ekufuneka umqeshi awanike inkampani i-LLC emva kokugxothwa kwentando yakhe Christina othandekayo! Isiqendu 84.1 seKhowudi yaBasebenzi yeRussian Federation. Inkqubo ngokubanzi yobhaliso lokupheliswa kwesivumelwano sengqesho Ukupheliswa kwesivumelwano sengqesho kwenziwa ngokusesikweni ...
Zingaphi iiyure umntu kufuneka asebenze ngexeshana?
Umntu kufuneka asebenze iiyure ezingaphi iiyure ezingaphi? Zeziphi iziphumo ezinokuthi zisetyenziswe kumqeshwa ukuba kuvela ukuba usebenza kwiindawo ezininzi ngokungesosigxina, ngaphezulu kwesiqingatha sesiqhelo kwindawo ephambili yomsebenzi? ...
Iyintoni inkqubo yokugqiba isivumelwano sekharityhulam?
Ithini inkqubo yokugqiba ikhontrakthi yengqesho? isampulu yesivumelwano sengqesho segqirha eliyintloko elibambeleyo okwethutyana liyafuneka Ngokuhambelana neKhowudi yezaBasebenzi yeRussian Federation, umqeshi unyanzelekile ukuba abhale ngokusesikweni ubudlelwane bezengqesho nomqeshwa ngokubhala (inqaku ...
Ngaba ndinokuthatha umhlalaphantsi kwangoko? Ukuba uneenyanga ze-7 ezishiye ngaphambi kokuthatha umhlalaphantsi !!! Ukuba unako, yiyiphi i-minus?
Ngaba ndingathatha umhlala-phantsi kwangethuba? Ukuba kusele iinyanga ezisixhenxe ngaphambi kokuthatha umhlalaphantsi !!! Ukuba kuyenzeka, yintoni ithabatha? Kwimeko apho uye wagxothwa ngenxa yokuncitshiswa kwabasebenzi okanye kwi ...
Ngaba irhafu yengeniso ichithwe kwiholo lokugula?
Ngaba irhafu yengeniso ichithwe kwiintlawulo zekhefu lokugula? Ikhefu lokugula - yimbuyekezo kumntu WENGENISO ngexesha lokukhubazeka kwakhe, ukuze irhafu ibanjwe. Ewe. Iphe. 1) Ubugcisa. 217 yeKhowudi yeRhafu yeRussian Federation Masityhile ...
Ngaba kunokwenzeka ukuba uqalise umrhumo womsebenzi owongezelelweyo?
Ngaba ndingafaka intlawulo eyongezelelweyo kwintlawulo eyongezelelweyo? Inqaku le-151. Umvuzo wokudibanisa ubuchwephesha nokwenza imisebenzi yomqeshwa okwethutyana ongekhoyo _ 1. ISiqendu 151 seKhowudi yaBasebenzi siyafana kumxholo ...
Yiyiphi ipenshoni encinci yeminyaka yobudala eRashiya.
Yintoni umhlala-phantsi omncinci waseRussia. Ummandla weRashiya Ubuncinci bepenshini, kwiiruble / ngenyanga Umndilili wepenshini, kwiiruble / ngenyanga eRussia 6 354 10 890 12 4002014 2015 2014 XNUMX ...
yintoni umqeshwa ekunciphiseni
Yintoni efanele ukuhlawulwa ngumqeshwa kwimeko yokungabikho emsebenzini Umqeshi xa ephelisa ikhontrakthi yengqesho ngenxa yokunciphisa inani okanye abasebenzi okanye ukupheliswa kombutho kunyanzelekile ukuba ahlawule umqeshwa: umvuzo we ...
Ukuhlawula ikhefu lokufunda. Imigaqo, umyalelo, ukubala.
Intlawulo yekhefu lokufunda. Ixesha, iodolo, ukubala. Umqeshi kufuneka abonelele ngekhefu ekuthiwa lelokufunda kubaqeshwa abafunda bengekhoyo kwiiyunivesithi ngesiseko sesatifikethi somnxeba esikhutshwe liziko lemfundo. Ifom yesatifikethi esinje yamkelwe yi-Ofisi yoMphathiswa Wezemfundo ...
Imibuzo ye-77 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,894.